ताजा समाचार – Page2– उज्यालो नेपाल Ujayaalo
बिहानमा हिँड्नुका फाइदा
May 19, 2018 उज्यालो नेपालLeaveaComment on बिहानमा हिँड्नुका फाइदा
नियमित हिँड्नु स्वस्थ जीवनशैलीको महत्वपूर्ण पाटो हो । बिहानको हिँडाइले त स्वास्थ्यलाई कैयौँ फाइदा पुर्‍याइरहेको हुन्छ । बिहान हिँड्दा दिनभर शरीर फुर्तिलो हुने मात्र नभई मोटोपन, मुटुरोगजस्ता कैयौँ समस्याबाट पनि बच्न सकिन्छ । यस्ता छन्, बिहानमा हिँड्नुका फाइदा : शहरी क्षेत्रका धेरै मानिस हिँड्न मन गर्दैनन् । यस्तो बानीले शरीरलाई वेफाइदा मात्र पुर्‍याउने नभई कालान्तरमा […]
May 19, 2018 May 19, 2018 उज्यालो नेपालLeaveaComment on कस्तो व्यक्तिलाई कस्तो सुताइ उपयुक्त हुन्छ?
खानपान तथा रहनसहन सही नहुँदा शरीरमा विभिन्न रोगले घर गर्छन् । यो त सबैलाई थाहै छ । तर, सुत्ने तरिका सही नहुँदा पनि स्वास्थ्य समस्या निम्तिन्छ भन्नेचाहिँ कमैलाई ज्ञान हुन सक्छ । कस्तो व्यक्तिलाई कस्तो सुताइ उपयुक्त हुन्छ त ? जानिराख्नुहोस् : श्वासप्रश्वास, मुटु, ग्यास्ट्रिकलगायत समस्या भएका व्यक्तिले सुत्नेवेला विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । घुर्नु पनि […]
यसकारण पुरुषमा निः सन्तान समस्या
May 19, 2018 उज्यालो नेपालLeaveaComment on यसकारण पुरुषमा निः सन्तान समस्या
नेपाली समाजमा अहिले पनि निःसन्तानको दोष महिलामा मात्र देखाउने प्रचलन छ । निःसन्तानको समस्या भएकालाई घृणा गर्नसमेत पछि पर्दैन, मानिस । तर, निःसन्तान अर्थात् बाँझोपनाको कारण महिला मात्र नभई पुरुषमा पनि हुन्छ । अर्थात्, यस्तो समस्यामा पति–पत्नी नै जिम्मेवार हुन्छन् । निःसन्तान हुनुका विविध कारण छन् । कतिपयमा जन्मजात कारण हुन्छ भने कतिलाई पछि आएर […]
May 19, 2018 उज्यालो नेपालLeaveaComment on प्रहरीमा व्यापक सरुवा बढुवा, हवल्दारदेखि डीआईजीसम्म !
काठमाडौं : प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवा भएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को पदस्थापन गरेको छ। शुक्रबार राति एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भएका १६ जना र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बाट एसएसपीमा बढुवा भएका २२ जनाको पदस्थापन गरेको हो। प्रहरी मुख्यालयले शुक्रबारै पाँच जना डीआईजी र ११ जना एसएसपीको सरुवा गरेको छ। प्रदेश प्रहरी […]
बिहानको साढे ११ बज्दै थियो होला । बुधबार बिहानको कुरो गर्दैछु । कौशल्टारबाट बानेश्वर आउँदैथिएँ । लोकन्थलीदेखिको जाम छिचोल्दै म चढेको ट्याक्सी लोकन्थली जडिबुटीको सिमानामा पर्ने मनोहराको पुलसम्म आइपुग्यो । पछाडिबाट साइरन बजाउँदै एम्बुलेन्स आउँदै थियो । केहीले बाटो छोडे, केहीले छोडेनन् । एम्बुलेन्समा मृत्युसँग संघर्ष गर्दैथिए एक बालक । अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बालक […]